प्रदेश नं. ५ मा ३ लाख ४७ हजार मतदाता थपिए | NiD - News
प्रदेश नं. ५ मा ३ लाख ४७ हजार मतदाता थपिए
बिरेन्द्र के. सी., कान्तिपुर दैनिक, भाद्र ९ २०७४
स्थानीय तह निर्वाचनमा फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नामै छुटेपछि केहीको चुनावमा उम्मेदवार बन्ने धोको पूरा भएन । मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउनेमा युवादेखि पाका उमेरसम्मका थिए ।
आगामी केन्द्र र प्रदेश चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले छुटेकालाई फोटोसहितको मतदाता नामावली दर्ता संकलन कार्यक्रमअन्तर्गत ५ नम्बर प्रदेशका १२ वटा जिल्लाबाट गरी तीन लाख ४७ हजार एक सय ६६ नयाँ मतदाता थपिएका छन् । दोस्रो चरणमा भएको स्थानीय तह चुनावमा २७ लाख ४७ हजार ६ सय ६४ मतदाता संख्या थिए । अहिले प्रदेश ५ मा मतदाताको संख्या ३० लाख ९४ हजार ८ सय ३० पुगेको छ । चुनावमा ७२ प्रतिशत मत खसेको थियो ।
नाम दर्ता गराउनेमा धेरैजसो युवा उमेरका रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । थपिएका मतदाताको संख्यामा १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै रुपन्देही र कम रुकुम छन् । रुपन्देहीमा ६६ हजार तीन सय ९६ मतदाता थपिए, यसअघि ४ लाख ६२ हजार ५ सय ४९ थिए । सबैभन्दा कम रुकुममा १० हजार एक सय एक नयाँ मतदाता थपिए । यसअघि एक लाख १९ हजार ३३ मतदाता थिए ।
नेता बन्ने र चुन्ने अवसर गुमे पनि आउँदो चुनावमा मताधिकार प्रयोग गर्न भन्दै नाम दर्ता गराउन घटौं पैदल हिंडेका थिए । प्रदेश ५ मा दोस्रो चरणमा चुनाव भएको थियो । भोट हाल्नबाट बञ्चित भएकाहरु फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न उत्साहपूर्वक सहभागिता भएको अर्घाखाँची निर्वाचन कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर नारायणप्रसाद बञ्जाडेले बताए । दुई दशकपछि स्थानीय चुनावमा जनप्रतिनिधि चुन्न नपाए पनि आउँदो प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा भोट हाल्न पाउने भएपछि नयाँ मतदाता हर्षित छन् । विकट बस्तीबाट घटौं पैदल हिँडेर वृद्धवृद्धासमेत लौरो टेकेरै नाम दर्ता गराउन आएको उनले बताए ।
निर्वाचन अयोगले साउनको पहिलो सातादेखि मसान्तसम्म नामावली संकलन गर्न निर्देशन दिएको थियो । पुन: भदौ ३ गतेसम्म नामावली संकलन गरिएको उनले बताए । जिल्लामा ११ हजार ७ सय ६७ मतदाता नयाँ थपिएको उनले बताए । भोटर लिस्टमा नाम नभएर वडा सदस्यमा उम्मेदवार समेत बन्न नपाएकोमा जलुकेकी वर्षा पुनलाई पछुतो छ । ‘आफ्नै असावधानीले नाम छुट्यो,’ २९ वर्षीय उनले भनिन्, ‘नेताले उम्मेदवार बन्न आग्रह गरे । तर, नामै नभएपछि उम्मेदवार बन्न पाइनँ । पछुताउनुबाहेक केही उपाय भएन । आउँदो प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा भोट हाल्न चार घण्टा पैदल हिडेर नाम दर्ता गराएँ ।’
५ नम्बर प्रदेशमा नयाँ मतदाताले आफूलाई मन पराएको उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाउने भएपछि खुसी छन् । सरकारले प्रदेश र केन्द्रको चुनाव मंसिर १० गते एकैपटक गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
१० स्थानीय तह रहेको पाल्पामा २० हजार ८ सय ११ नयाँ मतदाता थपिएको निर्वाचन अधिकृत धर्मा अर्यालले बताइन् । संकलन अवधिभर आफ्नो नाम दर्ता गर्न जताततै उत्साह नै रहेको उनले बताइन् । यसअघि एकलाख ६२ हजार दुई सय ५५ जना मतदाता थिए । प्रदेश ५ मा १२ मध्ये ६ पहाडी जिल्ला पर्छन् । १२ स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा १६ हजार ३२ नयाँ मतदाता थपिए । यसअघि १ लाख ८० हजार सात सय ८९ मतदाता छन् । ९ तह रहेको प्युठानमा १२ हजार ७७ थपिए ।
यसअघि एक लाख ७ हजार चार सय ४७ मतदाता छन् । रोल्पामा १० हजार आठ सय ८४ थपिए । १० स्थानीय तह रहको यहाँ पहिले १ लाख १७ हजार दुई सय ३१ मतदाता छन् ।
तराईका जिल्लाअन्तर्गत आठ स्थानीय तह रहेको बाँकेमा ३३ हजार तीन सय ९८ थपिए । दुई लाख ४६ हजार एक सय ३ जना पहिले मतदाता रहेका छन् । त्यस्तै दाङमा ४९ हजार चार सय २२ नयाँ मतदाता थपिए । १० तह रहेको यहाँ दुई लाख ९१ हजार एक सय ७५ हजार पहिले थिए । आठ तहको बर्दियामा २० हजार सात सय ८८ मतदाता थपिए । दुई लाख ५३ हजार एक सय ८८ यस अघि नै छन् ।
त्यस्तै, कपिलवस्तुमा ३२ हजार नयाँ थपिएको र दुई लाख ९६ हजार पहिले मतदाता रहेको निर्वाचन कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ । केहीले नागरिकता बनाएपछि फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका छन् ।